Nei paine oxygen kushomeka kwevarwere vecovid?
Nei zvimwe zvipatara zvisina oxygen yekuchengetedza varwere vari vapenyu
Kudikanwa kwepasi rose kweoksijeni kwawedzera kure pamusoro pechipo chinowanikwa muzvipatara, kunyanya muIndia - mumwe muenzaniso wekuti nyika yanga isina kugadzirira sei kubata nedenda reCovid-19.
Chinotyisa chazvino denda iri ndechekuti huwandu hwevanhu kupota pasirese vari kufa nekushaiwa mukana wekurapwa oxygen, kunyanya muIndia . Zuva rega rega, makumi ezviuru zvevanhu vanogamuchirwa kuzvipatara zvine Covid-19, zvichikonzera kudiwa kweoxygen kwakanyanya kupfuura kupihwa.
Oxygen inogadzira 21 muzana yemuchadenga. Makambani mashoma anoibata uye anoichenesa yakawanda, asi ivo vanotengesa yakawanda yacho kumaindasitiri. Matunhu mazhinji ane hurombo pasi rose haana zvivakwa zvekuendesa kana kushandisa giredhi rekurapa rinotengeswanemakambani aya, ayo akagadzirirwa kuendeswa kuburikidza nemapombi kumakamuri ezvipatara.
Zvimwe zvipatara nemakiriniki zvine michina inogadzira okisijeni yakanatswa pachiyero chidiki, asi izvi hazviwanzo. Saka zvipatara zvakawanda nevarwere vari munyika dzine hurombo nenzvimbo dziri kure vanovimba nesarudzo inodhura kwazvo: matura eoksijeni ayo ave mashoma munyika dzakatapurwa zvakanyanya nehutachiona.
Kushomeka kuri kubata varwere vane mhando dzese dzekupemha dzinoda oxygen, kwete avo chete vane Covid.
Sangano reWorld Health Organisation rakati muna Kukadzi kuti zvaizotora madhora 1,6 bhiriyoni kugadzirisa kuperevedza kweoxygen kwegore; izvozvi kufungidzira kwakamira pa $ 6.5 bhiriyoni. Kuedza kutora mari iyi kwakundikana, kunyangwe ichingova chikamu chidiki cheicho chakashandiswa pamishonga yekudzivirira uye kutsigira mari kwevana.makambani nevashandi.
Heano mhinduro kune mimwe yemibvunzo yakabvunzwa nezve dambudziko re oxygen.
Imwe mushandi achizadza matangi eoksijeni sebasa remahara rinopihwa nehurumende muIztapalapa, Mexico. Mumwedzi miviri yapfuura, iyo yepasirose isingagone kudiwa kweoksijeni yekurapa yakawedzera zvakapetwa katatu. Kiredhiti ... Luis Antonio Rojas weHfrance.fr
Zvakaipa sei kukurumidza, nekukurumidza ?
Tichifunga kudiwa kukuru uye kuri pachena kweoksijeni panguva yedenda rinokanganisa kufema, dambudziko harifanirwe kunge rakashamisa. Asi mugore umo uyo anoita sarudzo anotama kubva kune rimwe denda dambudziko kuenda kune rimwe - P.P.E. kushomeka, kukiyiwa, kutyisidzira kudonha kwehupfumi, kudzidza kure, kurapwa, majekiseni - iyo okisijeni haisati yambosvika pamusoro pechinyorwa.
yaive yakatarwa zvakakwana, "akadaro Robert Matiru, director director kuUnitaid, rimwe remapoka ehutano eruzhinji ari kushanda kugadzirisa kushaikwa neWorld Health Organisation. Kunyangwe denda risati rasvika, mamwe ematunhu ane hurombo haana kukwanisa kuona zvakakwana zvekushandisa. Asi pakanga pasina kusvika kutanga kwegore rino apo kushaikwa kweoksijeni kunouraya kwakarova kuchamhembe kweBrazil ,
, nekumwewo, kuti zvakave pachena kuti izvo zvakaonekwa sedambudziko rinogona kuve rave kuita emergency. Sangano reWorld Health Organisation rakagadzira boka rekurumidziro kushomeka kweoxygen ikadaidzira mari yekuzvigadzirisa. Ipapo
denda rakaputika muIndia
, kwarakanga rambove riine, richisundira oksijeni kuendesa pakati penyika. Nhamba yeIndia yehutachiona hwehutachiona hutsva hwecoronavirus yakwira kubva paavhareji yeanosvika zviuru gumi nezviviri pazuva pakati paKukadzi kusvika kumwedzi.Mazuva ese yenne anopfuura mazana matatu nemakumi matatu ezviuru svondo rapfuura - uye nyanzvi dzinoti iro rechokwadi rakanyanya kukwirira. Mumwedzi miviri yapfuura, iyo yepasi pasingagone kudiwa yeOxygen yekurapa yakawedzera zvakapetwa katatu kubva pasi pemamirioni mapfumbamwe emamirubhi pazuva uye kusvika pamamirioni anopfuura makumi maviri nemasere, sekureva kwemubatanidzwa wemubatanidzwa mapato ari
Inenge hafu yeichi chisina kuzadzikiswa chiri muIndia. Uye varevereri vehutano vanoyambira kuti dambudziko rinogona kudzokazve mune dzimwe nyika.
Mufananidzo Liquid oxygen matangi muchipatara muEl Paso. Chikwereti ... Joel Angel Juarez weHfrance.fr
Ko okisijeni inogadzirwa nekupihwa?
Munyika dzakapfuma, zvipatara zvinowanzovimba nematangi kuti aendese huwandu hweokisijeni yemvura, yakanyanyisa kuomesa kupfuura mweya wakajairika, unochengetwa mumidziyo mikuru. Iyo system yeIwo mapaipi anoyamwa gasi, achiabvumira iwo kuti awedzere kune zvakajairika kuwanda, uye nekuagovera iwo kune yega yega bedbhedha. Iyi ndiyo nzira inodhura kwazvo yekupa oxygen, uye makambani anopa okisijeni muhuwandu ane huwandu hwakakwana hwekugadzira kusangana nezvekurapa kudiwa. Mumavhiki apfuura, vamwe vacho vatanga
kumhanyisa kugadzirwa kwavo kwemishonga yekurapa nekutsausa chikamu cheindasitiri
, ine gasi ine zvirevo zvakasiyana.
Hurumende yeIndia yakaraira vagadziri kuti vatungamire kwenguva pfupi kugadzirwa kwavo kweoksijeni kuzvido zvekurapa.
Asi zvipatara zvakawanda pasirese hazvina kugadzirirwa kushandisa okisijeni yemvura, kushaya tubhu kuendesa kune varwere, uye hapana nzira yekuendesa panzvimbo yenzvimbo zhinji dziri kure.
Oxygen inogona zvakare kuwanikwa mune mashoma dense gasi fomu, muna dmabhodhoro anoda kuzadzwa kakawanda. Iyi kazhinji ndiyo inodhura sarudzo - inogona kuita zvakapetwa kagumi kupfuura huwandu hwakawanda hwemvura oksijeni - asi ndiyo chete inowanikwa kuvanhu muzvikamu zveiri kusimukira nyika.
Kunzwisisa dambudziko reCovid muIndia
Kushomeka kwemweya weoksijeni nemibhedha yemuchipatara, pamwe nemitero yepasi yekubaiwa nhomba, zvakawedzera hosha muzvirwere nekufa muIndia. Nhamba yezviitiko: Nyanzvi dzinoti chaiyo yekufa inodarika zviyero zviri pamutemo . Iyi graphic inoratidza
mashandiro anozivikanwa eCovid
akawedzera mumwedzi ichangopfuura nyika yese. Kurambidzwa kwekufamba: United States yatanga kudzora kufamba kubva kuIndia, uye
Australia yakarambidza kufamba kwese kwakapinda munyika,
kusanganisira pakati vagari vayo. Kubatsira sei:
Vanopa pasi rese vanopa mari kuchikafu, zvekurapa, P.P.E. uye matangi eoksijeni, pakati pezvimwe zvinhu zvakakosha.
Munyika zhinji vanhu vakamhanyira kunotenga kana kuzadza mabhodhoro akadaro kunhengo dzemhuri, asi vachida zvakapfuurwa.
Zvimwe zvipatara zvine mafekitori avo ekuburitsa mweya kubva mumhepo, tekinoroji inozivikanwa sekumanikidza kusvetwa kwekumwa kana PSA Asi masystem anodhura, uye chipatara chinotenga chimwe chinofanira zvakare kuisa pombi system yekuendesa oxygen ku pamubhedha.
Kune zvakare michina midiki inonzi oxygen concentrators iyo inogona kushandira mumwe murwere kana vashoma. Kunyangwe hazvo munhu achigona kuita mazana emadhora emadhora, chipingamupinyi chikuru munyika dzine hurombo, kudiwa kwadzo kwakakwira nekukurumidza kupfuura zvinogona vagadziri.zvibudise.
Mufananidzo Chemishonga mumusha weTuscan weCastellina muChianti, Italy, unogadzira magaba eoksijeni asina chinhu kuseri kwefamasi. Kupa okisijeni mumakani kanodhura zvakapetwa kagumi pane kuendesa iyo yakawanda. Chikwereti ... Nadia Shira Cohen weHfrance.fr
Chii chinodiwa kugadzirisa dambudziko iri?
Mari uye nenguva.
Vagwinyiriri vehutano hweveruzhinji vanoti zvipatara zvinofanirwa kunge zvine zvivakwa zvePSA uye pombi dzinoperekedza, asi munyika dzine hurombo mhinduro iyi inogona kunge ichidhura zvisingaite, ichiwanika chete nerubatsiro rwenyika dzese. Hurumende yeIndia inoronga kuisa michina mumazana ezvipatara, asi zvinogona kutora mwedzi.
Makambani anogadzira PSA mafekitori uye okisijeni concentrators ari kukwirisa kumusoro kugadzirwa pasirese, asi izvo zvakare zvinotora nguva. Vagadziri veoksijeni yakawanda uye lHurumende dzinogara dzichiedza kugadzirisa maketeni ekupa kuti iwane gasi rakakosha kwarinonyanya kudikanwa. KuIndia, hurumende inoshandisa zvitima uye kunyangwe
ndege dzechiuto dzekufambisa
kuunza oxygen kune vanorwara.
Dai mari yakakwana yaivapo, hurumende nemapoka epasi rese vaigona kunge vaine zvibvumirano zvekutenga nevatengesi vazhinji, uye zvekukurumidza okisijeni zvigadzirwa zvaigona kuiswa mu
Kana pasina chimwe chinhu, mwedzi mishoma yapfuura yaratidza zvakajeka kuoma kwekuyedza kuwedzera okisijeni zvigadzirwa pane pfupi ziviso, mukati medambudziko.
Panzvimbo iyoyo, VaMatiru vakati: Nyika inofanirwa kuisa mari mukugadzirira, "kuitira kuti kana pakaitika simba, tinogona kumanikidza 'Go'.
Portugal inoraira lisbon kuvharira mukati mevhiki senge kusiana kwedelta kuchipararira
2021-06-19 10:08:03 | Nyika
Danho iri rakauya mushure mekunge nyika svondo rino yanyora nhamba dzayo dzepamusoro soro kubva munaKurume, ichisvetukira kuzvinopfuura 1,300 mumaawa makumi maviri nemana apfuura. ...
UN inoshora kubvuta masimba kweMyanmar, inodaidzira kurambidzwa kwemaoko
2021-06-19 09:22:06 | Nyika
Mukufamba kusingawanzoitika, United Nations General Assembly yakashora kubvuta masimba muchiuto muMyanmar ikadaidzira kuti nyika irambidzwe nemauto mukugadzirisa kunoratidza kupesana kwepasi rose nejunta uye ichida kudzoserwa kweshanduko yenyika. Kutongwa kwakavharwa kwemusuwo kwaAung San Suu Kyi mu...
Kiwi hondo: chibereko chegoridhe chinokonzera kupesana pakati peNew zealand neChina
2021-06-19 09:18:54 | Nyika
Iyo inyaya yesimba repasirese, kushandisirwa pachivande, denda uye chibereko chidiki chine mvere. Inowanikwa pamashefu ezvitoro uye mumabhokisi emasikati, kiwi inozvininipisa ndiyo inonyanya kukosha kutengesa kuNew Zealand. Hondo dzichangoburwa dzekutonga muchero, zvisinei, dzakaratidza makakatanwa ...
EU inokundikana mudare redzimhosva yekuwana madhizagi ekukurumidza emamirioni zana nemakumi matanhatu emishonga yeOxford covid
2021-06-19 09:16:59 | Nyika
EU yakakundikana mukuyedza zviri pamutemo kuwana mishonga yekudzivirira inosvika mamirioni zana kubva kuAstraZeneca kupera kwemwedzi, ichiwana mutongo wekuti nzvimbo dzeOxford neStaffordshire dzaifanirwa kunge dzakashandiswa munguva dzekare kuendesa. yakaraira kambani yeAnglo-Sweden kuti ibudise mam...
Kune hutachiona hwakamirira kuseri kwezviitiko: ungamisa sei denda rinotevera?
2021-06-19 08:41:09 | Nyika
Pakupera kwa2019, Kirby Institute virologist Prof. Stuart Turville aitsvaga rimwe basa. "Mari dzekupihwa mari dzaive shoma kwazvo kuti vararame, " akadaro. Asi asati abva, denda reCovid-19 rakarova. Iye zvino anotungamira iyo yekuchengetedzwa kwepamusoro-chengetedzo yezvivakwa labhu kuUniversity yeN...
'Panzira yekutsakatika': koala dzinogona kukurumidza kunyorwa sedziri mungozi munzvimbo dzekumabvazuva kweAustralia
2021-06-19 08:28:00 | Nyika
Koalas munguva pfupi inotevera inogona kuverengerwa panjodzi muQueensland, New South Wales neAustralia Capital Territory mushure memoto wemoto wakaparadza vanhu varikutambura nekuparadza nzvimbo dzinokosha. yeInternational Fund yeZvipfuyo Hutano...
Munhu akaurayiwa mushure mekufungidzirwa kuti chamupupuri chakarova Auckland
2021-06-19 05:21:33 | Nyika
Munhu mumwe afa uye vanhu vaviri vakuvara mushure mekufungidzirwa kwakaitika nechamupupuri chakarova nzvimbo yekutakura zvinhu muNew Zealand guta reAuckland nemugovera mangwanani. Vashandi vemoto vakapindurawo kumafoni anosvika zana mushure mekunge chamupupuri chaparadza ruwa rwePapatoetoe, ruchirov...
Makanzuru eUK anoramba zvitanhatu kubva pagumi covid yekuzviparadzanisa wega zvikumbiro zvekubhadhara
2021-06-19 05:12:15 | Nyika
Vanoda kusvika zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevashandi muEngland vanotsvaga rubatsiro rwekuvabatsira kuzviparadzanisa varambidzwa rubatsiro, zvichikonzera kunyeverwa kubva kumabatanidzwa kuti mutemo wakakosha wekuganhurira Covid-19 uri 'kukundikana' pakatarisana nehutachiona huri kukwira. mune g...
Bear akapfurwa akafa mushure mekuparara muSapporo, Japan
2021-06-19 00:18:18 | Nyika
Vavhimi vakapfura vakauraya bere rakasviba mudhorobha reSapporo kuchamhembe kweJapan mushure mekunge rapararira muguta, richikuvadza vanhu vana, kusanganisira musoja. Zviremera muSapporo zvakatumira neChishanu kuti bere "raparadzwa, " nhepfenyuro yemuno yeTV ichiti vavhimi vapfura Pakutanga, mifanan...
Hong Kong vanhu vanomira kuti vatenge mazuva ese makopi eApple mushure mekusungwa kwemupepeti-mukuru
2021-06-19 00:16:47 | Nyika
Hong Kongers akamira mumigwagwa yemaguta kusati kwayedza neChishanu kuti vatenge chinyorwa chazvino cheApple Daily pepanhau, zuva mushure meNational Security Police kusunga mupepeti waro nevamwe maneja. Musi weChina mangwanani, mazana emapurisa kubva kuHong Kong Police department reNational. Dhipati...
Chinese nyanzvi yakamiswa nekuda kwekutsigira barika
2021-06-19 00:11:55 | Nyika
Mumwe mudzidzi weChinese akamiswa neyunivhesiti mushure mekukurudzira barika paakaundi yake yeWeChat, zvichimutsa nhaurirano nyowani pamusoro pekuchinja kwemaonero eChina nezvebonde. Bao Yinan, mutsvakurudzi wezvemitemo paUniversity of Political Science neFore Chinese law firm muShanghai, akapomerwa...
Netherlands inopa mahara shering se covid jab kukurudzira
2021-06-19 00:10:12 | Nyika
Mushure mekunge Russia yapa mota, spliffs kubva kuWashington state, huku mhenyu dzinobva kuIndonesia neHong Kong mukana wemba inosvika 1,2 miriyoni, nyika ichangoburwa yekupa mubairo kune vanhu vanoratidzira mifananidzo yavo Covid ndiyo Netherlands - ine herring herring. yeHollandse nieuwe, kana chi...
Vanhu havana kuteerera: kuurayiwa kwaJulie Douib kunokonzeresa kurwisa kuuraya vakadzi muFrance
2021-06-18 23:50:58 | Nyika
Julie Douib akaudza vanhu vazhinji kuti anofunga kuti waaimboshanda naye achamuuraya. Akaudza mhuri yake. Akamumhan'arira kumapurisa kagumi. Iye akatovaudza kuti aive nepfuti uye aitya kuti aizoishandisa, asi ivo vakati hapana zvavaigona kuita kunze kwekunge amunongedzera. Saka zvaifanira kunge zvak...
Pamwe nekuti zvinonzwa zvakanaka: murume wechiFrench anoenda kwese nenjiva
2021-06-18 23:49:19 | Nyika
Xa Xavier Bouget, makumi masere, paanoenda nebhasikoro, hangaiwa chena inokwira paheti yake. Paanogunun'una mumusangano wake, iye anotora zviboora nezvipikiri. Uye paanodiridza bindu rake, anomutarisa kubva pabendekete rake. bendekete rake kana kufamba padyo naye. Xavier Bouget anomira naBlanchon...
NeChishanu kupfupisa: vakasununguka vakatsemura 'bhuruu madziro' musarudzo dzekutsvaga
2021-06-18 23:38:13 | Nyika
Musoro wenyaya: "Kukunda kukuru" Hi, ini ndiri Warren Murray. Tinotarisira kuti zvinosvika panzvimbo iyi. Lib Dems yakahwina sarudzo-mudunhu reChesam neAmersham muBuckinghamshire, ichitora chigaro chechokwadi kubva kuTories. Zvinokatyamadza, Lib Dem Sarah Green akawana 21,517 mavhoti, achisiya Conse...